Relationship and Porn - ညစ်ညမ်းတဲ့သူတွေကိုသုံးတဲ့သင်၏ ဦး နှောက်
ဒီနေရာမှာဆက်ဆံရေးနှင့် porn အကြောင်းဆောင်းပါးအချို့ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးအများစုသည်လိင်မှုကိစ္စကျူးလွန်ခြင်းအပေါ်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းထက်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူကိုအာရုံစိုက်သည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့ကြားသိသောအမျိုးသားအများစုသည်အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၂၈ နှစ်အတွင်းဖြစ်ပြီးကျူးလွန်သောဆက်ဆံမှုများမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Porn အပ်သူကားအဘယ်သူယောက်ျားတွေ: လိင်နှင့် Romance တွင်
အလွန်ညစ်ညမ်းသော၊ ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသောလိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များကသာကျွန်ုပ်အားတုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောရိုးရှင်းသောအပြုံးနှင့်မျက်လုံး၏ဆုံတွေ့မှုမှအပြုသဘောဆောင်သောခံစားမှုရရှိခြင်းအထိဖြစ်ခြင်းသည်ဤဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုတန်ဖိုးရှိစေသည်။ ”
သငျသညျ porn မရှိအထူးသဖြင့်ကန့်ကွက်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ချစ်ပြီးသူကနှစ်ပေါင်းအကြီးအကျယ်သုံးပြီးပြီးအရှုံးမပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ဒီနေရာတွင်ကသူ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုထောကျပံ့ပေးနိုငျ5နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
တစ်ဦးကအကြီးစား Porn အသုံးပြုသူချိန်းတွေ့?
ညစ်ညမ်းသောသို့မဟုတ်လိင်ဆိုင်ရာအထောက်အကူများ (တုန်ခါသူများ၊ ဆိုက်ဘာလိင်) ကိုပြင်းထန်စွာအသုံးပြုခြင်းသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအသုံးပြုသူများသည်တကယ့်လိင်ကိုထိုသို့သောလှုံ့ဆော်မှုများကိုပိုမိုနှစ်သက်စေသည်။ ၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာပြissuesနာများဖြစ်စေနိုင်သည်၊ အိမ်ထောင်ဖက်များသည်သူတို့၏ဆွဲဆောင်မှုနှင့်သံသယကိုသံသယဖြစ်စေနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၎င်းသည်အလွန်အကျွံထင်ဟပ်ခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်သောပုံပေါက်သောဆက်ဆံရေးကိုပွတ်တိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် Romeo Juliet လျစ်လျူရှုနေပါသလား?
Pair ကို Bond 101: ပစ္စည်းအသစ်အဆန်း-အမျှ-Aphrodisiac သတိပြုပါ
ဒီနေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်အများစုဟာတွဲဆက်ချင်တဲ့ချစ်သူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ dopamine-cranking“ novity-as-aphrodisiac” နည်းဗျူဟာကို အခြေခံ၍ လိင်ကစားစရာအသစ်တစ်ခုကိုကြိုးစားခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ခြင်း၊ မိတ်ဖက်များဖလှယ်ခြင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ ရဲရင့်ခြင်းသို့မဟုတ်နာကျင်စေသောလိင်ဆက်ဆံခြင်းစသည်တို့ကိုအခြေခံသည်။ အသစ်အဆန်းနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်အမှန်ပင်နှိုးဆွပေးသည်။ သို့သျောလညျးအသစ်အဆန်းအဖြစ် ashrodisiac အားနည်းချက်များရှိသည်။
Pair ကို Bonders စွဲဖို့ပို Vulnerable ဖြစ်ပါသလား
နို့တိုက်သတ္တဝါများ၏ ၃% သာလျှင်အနှောင်အဖွဲ့များဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်သားသမီးများမွေးမြူရန်အတူတကွနေထိုင်ကြသည်။ သည်အခြားနို့တိုက်သတ္တဝါများအတော်လေးကရာဖြစ်ကြသည်။ သင်ယူလေ့လာသည့်အပြုအမူများကိုလည်းမပြုလုပ်ရ။ သူတို့က ဦး နှောက်အစီအစဉ်တွေပါ။ Pair bonding or love သည်အမှန်တကယ်ပရိုဂရမ်ထားသော“ စွဲလမ်းမှု” ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုများအရချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျသောတိရိစ္ဆာန်များသည်စွဲလမ်းမှုကိုပိုမိုခံကြရသည်။ လူသားတွေလား။
Porn ဖြတ်ရည်းစား?5သိကောင်းစရာများ (2013)
Porn အပ်သူကားအဘယ်သူယောက်ျားတွေ: လိင်နှင့် Romance (2012) တွင်
ဟောလိဝုဒ်သည်ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည် (ရုပ်ရှင်၊ “ ယောက်ျား၊ မိန်းမနှင့်ကလေးများရုပ်ရှင်”) ။